Ciyaar xiisobadan oo ka dhacdey garoonka kubada Cagta Boosaaso+Sawiro – SBC
Ciyaar xiisobadan oo ka dhacdey garoonka kubada Cagta Boosaaso+Sawiro
Posted by Webmaster on Janaayo 22, 2013 Comments
Dowladda oo Howlgallo Cusub Ka Bilaabaysa Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo oo U Hambalyeeyay shacabka Kuweyt
Masuuliyiin Booqday Dhaawacyadii Muqdisho.
Ciyaartan oo aheyd mid ay isku soo diyaariyeen koox wariye yaal ah iyo koox kale oo ka tirsan ciyaaryahano caan ahaa oo ka fariistay ciyaaraha kana tirsanaa ciyaaryahanadii hore ee gobolka bari aya ka qabsontay garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso.
Dadweyne aad u tiro badan aya u so dawasho tagay waxana ay la kulmeen ciyaar cajiib ah oo aad u qurux badan taas oo ay soo bandhigeen labada koox ee ciyaareysay.
Wareegii hore ee ciyaarta waxa ay ku soo gaba gabowday 3-1 oo ay ku taagroonaadeen ciyaaryahanada la ciyaarayay wariye yaasha.
Markii la isu soo laabtay ayaa ciyaarta waxaa siweyn wax uga bedelay wariye yaal isku shaandheyn ku sameeyay ciyaarta oo gadaal ka soo galay, waxaana gool labaad u dhaliyay wariye yaasha Maxamed Cusmaan Damdam oo gadaal ka soogalay ciyaarta.
Ciyaarta oo mareysa 3-2 ayaa waxaa hadana markale goolkii bar bar dhaca la yimid ciyaartoo gaba gaba ku dhow ciyaaryahan wariye Damdam ka dib markii uu baas qurux badan ka helay waariyayaashii afka hore ku weheliyay.
Sidaasi waxay ciyaartu ugu soo dhamaatay 3-3 barbardhac, waxaana loo dhigay labada koox Gool ku laadyo taas oo u sahashay kooxda wariye yaasha ina y ku helaan guul ka dibmarkii 4 gool kulaad oo la tuurtay ay ku dhaliyeen 1 gool iyo kooxda kale oo la yimid 0.